भिडियो Archives - Nepal News Site
गायक दावा के शेर्पाको कथै कथा सार्वजनिक
काठमाडौ, गायक दावा के शेर्पाको कथै कथा सार्वजनिक गरिएको छ । विशेष गरेर कोभिड -19 ले विश्वमा नै भयावह स्थिति सृजना गरेको परिवेशमा देखिएको भिडियो मे २४ तारिखको दिन शेर्पा फिल्म युटुभ च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो । कृष्ण प्रसाद उप्रेतीको शब्द मा गायक दावा के शेर्पाले स्वार र संगीत दिएका हुन् । https://youtu.be/wSfvAT...
फोटो खिच्न भए पनि जानै पर्ने रेस्टुरेन्ट
बन्दिपुर घुम्ने कि फेवाताल ? समुन्द्रमा डुब्ने कि अन्तरिक्षमा रम्ने ? चिहानमा पसेर मुटु कमाउने कि पहाड र झरनासँग हो रमाउने ? यो सबै कुराको अनुभव अब एकै ठाउँमा गर्न पाउने । एकचोटी जानै पर्ने ठाउँ वान डे थ्री डी रेष्टुरेन्ट । थ्री डि भित्तेकलासँगै रेष्टुरेन्ट व्यवसायको कुरा । बाहिरी मोहोडामै परम्परागत घर र साना गल्ली ...
एलिना को ‘चेपेको दोभान’ सार्वजनिक
पछिल्लो समय लोक दोहोरि गीतमा मौलिकता र संस्कृति झल्कने गीतले राम्रै स्थान पाउदै आएकोछ ।यहि भिडमा गोर्खाली चर्चित गायिका एलिना गुरुङ र पृथ्वी गुरुङ्गकाे झ्याउरे गित ‘चेपेको दोभान’ बजारमा आएको हाे । लय संगीत गायक गुरुङको रहेको उक्त गीतमा जिजु गुरुंगले एरेन्ज गरेका हुन् ।दिप गुरुङले निर्देशन गरेका भिडियोमा विजय लामाले...
धुर्मुसले खोले ठेला पसल
चितवन ः चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सुरू गरेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले ठेला पसल पनि खोलेको छ। ठेला पसलमा बदाम, पानी, स्याउ, सुन्तला र मःम बेच्न राखिने फाउन्डेसनका प्रमुख सीताराम कट्टेल धुर्मुसुले बताए। आइतबार सुरू ठेला पसलबाट संकलन भएको सबै पैसा रंगशाला निर्माणमा खर्च गर्ने उनको भनाइ छ। ठेला ...
‘सेल्फी किङ्ग’को ‘जाली रुमाल’ सार्वजनिक
काठमाडौं । चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’को गीत सार्वजनिक गरिएकाने छ । अभिनेता वीपिन कार्कीलाई किङ्ग अवतारमा प्रस्तुत गरिएको फिल्म ‘सेल्फीकिङ्ग’ले पोष्टर र टिजरपछी गीत सार्वजनिक गरेको हो । ‘जाली रुमाल’बोलको गीतमा बि पाण्डेको शब्द छ भने सुभाष भुषालको संगीत रहेको छ र अन्जु पन्त र पुरुषोत्तम सुवेदीको स्वर रहेको छ । सार्वजनिक ल...
काठमाण्डौ - गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा ‘तिम्रो मेरो’ बोलको नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा कैलास मैनालीको शब्द रहेको छ भने संगीत राज कुमार बगरले गरेका छन् । साहष शाक्यले संगीत संयोजन गरेको गीतको सम्पादन राजेश कुमार ले गरेका हुन् । विभिन्न रमणीय स्थलहरुमा छायांकन गरिएको म्युजिक भिडियोमा अमन श्रेष्ठ र ...
सिस्नुपानी नेपालको व्यंग्यत्मक देउसी भैलो (भिडियो सहित)
काठमाडौं : सिस्नुपानी नेपालले यस बर्षपनि समसामयिक विषयमा व्यंग्य कस्दै देउसी भैलो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको उपस्थितिमा विगत बर्षझै यस बर्षपनि देउसी भैलो आयोजना गरेको हो । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आइतबार साँझ आयोजना गरिएको देउसी भैलो कार्यक्रममा पूर...
परम्परागत देउसी भैले
पछिल्लो सयम गाउँघरमा आयोजना हुने परम्परागत देउसी भैले लोप हुदै गएको छ । पछिल्लो सयम गाउँघरमा आयोजना हुने परम्परागत देउसी भैले लोप हुदै गएको छ । यसै क्रममा एक शिक्षक तालिममा सहभागीले परम्परागत देउसीलाई झल्काउँने प्रयास गरेका छन् । https://youtu.be/qu8z9Vafjgk...
काठमाडौं । । पति–पत्नी झगडालाई परालको आगो भनिन्छ । केहिबेर दन्किन्छ, अनि केही क्षणमै निभ्छ । तर जालमान र शिलाको झगडाको आगो निभेन । साउन २५ गते पति–पत्नी एकआपसमा लड्न थाले । त्यही घरमा बस्ने बालिकाले दुवै जनाबीचको झगडा देखिरहेकी थिइन् । ती बालिकाले अन्य कोठामा बस्नेहरूलाई झगडाबारे सुनाइन् । त्यत्तिकैमा केहि महिला झगड...
ताराखोला डिजिटलको तीज गीत राजधानी सार्वजनिक
नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीज नजिक आँउदै छ यसै अवसरमा कलाकाहरुले गीत सार्वजनिक गरिरहेका छन । रविको काण्डले सुस्ताएको तीज गीतको बजार अब केहि दिनको लागी भने तात्न थालेको छ । यसै अवसरमा ताराखोला म्युजिक प्रालिको नयाँ तीज गीत राजधानी भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको छ । अमृत चापागाँइको शब्द तथा कमल चापागाँइको...